Falaqeynta Kulanka Aston Vila Vs Liverpool Ee FA Cup-ka Xili Shaki Uu Ku Jiro Kulanka
HomeHoryaalka IngiriiskaFalaqeynta Kulanka Aston Vila Vs Liverpool ee FA Cup-ka xili Shaki uu ku jiro kulanka
January 8, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Liverpool ayaa la ciyaaridoonta kooxda Aston Villa xili kulanka laga muujinayo shaki kadib markii ciyaarhano ka tirsan Aston Villa laga helay Xanuunka Corona.
Haddii ay ciyaartu dhacdo, Liverpool ayaa markale waayi doonta khadka dhexe ee Naby Keita.
Daafacyada Virgil van Dijk iyo Joe Gomez ayaa la filayaa inay seegi doonaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Aston Villa ayaa laga badiyay lix ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay FA Cup la ciyaarto Liverpool, inkasta oo ay badisay kulankii ugu dambeeyay ee noocan oo kale ah ee dhexmaray labada koox semi-finalka 2015 ee ka dhacay Wembley (2-1)
Mid kasta oo ka mid ah seddexdii jeer ee ugu dambeysay Liverpool waxa ay Aston Villa ka reebtay FA Cup waxa ay u gudubtay finalka (1987-88, 1991-92 iyo 1995-96).
Tan iyo markii ay garaaceen Liverpool semi-finalkii 2014-15, Aston Villa ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee FA Cup ee ay la ciyaareen kooxaha Premier League wadar ahaan wadar ahaan 0-10.
Liverpool ayaa laga reebay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay ee FA Cup ee ay la ciyaarto kooxaha kale ee Premier League, marka laga reebo labadaas kulan ee wareega saddexaad ee ay la ciyaarayaan Everton (2-1 2017-18, 1-0 in 2019-20) ).